သူငယ်ချင်းတွေစုပြီး စီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုရင် - Thutazone
By ThutammPosted on April 4, 2018
ရေးသားသူ – မိုးရှင်း (I.M.T)
ဒီခေတ်ထဲမှာ အချို့လူငယ်တွေ သူငယ်ချင်းတွေစုပြီး လုပ်ငန်းတစ်ခုကို အတူတူလုပ်တတ်ကြပါတယ်။ Start-up လေးတွေ ဟိုဟိုဒီဒီရှိလာကြပါတယ်။ ဒီလိုပေါ်လာတာ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အများအားဖြင့် ရေရှည်မခံပဲ ပြိုကွဲသွားတတ်ကြပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့်များပါလဲ? ကျွန်တော်လည်း Start-up လုပ်နေတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဒီလိုနယ်ပယ်ထဲက လူတွေလည်းအများကြီးတွေ့ဖူးတာကြောင့် သိသမျှ ရှဲပါရစေ။
မြန်မာတွေမှာ အကြီးမားဆုံး အားနည်းချက်က အားနာတတ်ခြင်းပဲ။ စီးပွားရေးမှာ အားနာလို့မရဘူးဆိုတာကို လက်မခံနိုင်ကြဘူး။ ခင်တာကခင်တာပဲ စီးပွားရေးလုပ်ကြပြီဆိုရင် စာချုပ်စာတမ်း၊ မှတ်တမ်း မှတ်ရာ စသဖြင့်ပြတ်ပြတ်သားသားရှိသင့်တယ်။ နင်ကဘယ်လောက်ပိုက်ဆံစိုက်မှာလဲ၊ အချိန်ရော ဘယ်လောက်ပေးမှာလဲ၊ ဘယ်အချိန်အထိလုပ်နုိုင်မှာလဲ၊ ဘယ်အချိန်အထိအမြတ်မရပဲနေနိုင်လဲ၊ စသဖြင့် အားလုံးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှိရပါမယ်။ ကတိပေးထားသလိုမလုပ်ရင်ရော ဘာဖြစ်မလဲ၊ ဖြစ်နုိုင်တဲ့ထောင့်ပေါင်းစုံက စဉ်းစားပါ။ ဆက်မလုပ်တော့တာ၊ ထွက်သွားတာ၊ သစ္စာဖောက်တာ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မထင်ပါနဲ့။ ငွေကလူ့စိတ်ကို မထင်မှတ် ထားနုိုင်လောက်အောင် ပြောင်းလဲစေပါတယ်။ စာချုပ်စာတမ်းကသာ သေသေချာချာ ထိန်းချုပ်နုိုင်တာပါ။
ချမယ်၊ လုပ်မယ်၊ ဆင်ဖမ်းမယ်၊ ကျားဖမ်းမယ်၊ တကယ့်တကယ် ခြင်ဖမ်းချင်ရင်တောင် ရှာမရတော့တဲ့ သူမျိုးတွေရှိပါတယ်။ သွေးပူတုန်းလျှောက် ပြောတာတွေကို မယုံမိပါစေနဲ့။ သေသေချာချာအချိန်ပေးပါ။ အားလုံးစိတ်ပါတာသေချာမှလုပ်ပါ။ သွေးပူတုန်း ဝုန်းဝုန်းဒိုင်းဒိုင်းလုပ်ပြီး နည်းနည်းလောက် လှိုင်းလှုပ်တာနဲ့ အိမ်ပြန်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ သူမျိုးတွေရှိပါတယ်။ မုန်တိုင်းသာတုိုက်ရင်တော့ ရှာလို့ပါရတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အားလုံးတကယ် စိတ်ပါတာဟုတ်မဟုတ်သိဖုို့လိုပါတယ်။
(၃) စိတ်ကူးသမားရှိပြီး အဆုံးသတ်သမားမရှိခြင်း
တစ်ခါတစ်လေ လူတွေငြင်းတတ်ကြတယ်။ Idea ရှိတဲ့သူနဲ့ အကောင်အထည်ဖော်တတ်တဲ့သူ ဘယ်သူက ပိုအရေးကြီးလဲတဲ့။ ကျွန်တော်တစ်ဦးတစ်ယောက် ထဲရဲ့အမြင်အရ အိုင်ဒီယာဟာ လူတော်တော်များများ စဉ်းစားတတ်ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီအိုင်ဒီယာကို အကောင် အထည်ဖော်နုိုင်မယ့်သူသာ ရှာရခက်တာပါ။ ဥပမာ ဘောလုံးတစ်သင်းမှာ တစ်သင်းလုံးအရေးကြီးတာမှန်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဂိုးသွင်းဖို့ အဆုံးသတ်ကောင်းတဲ့ ကစားသမားရှိမှ နိုင်မှာပါ။ တစ်သင်းလုံးပိတ်ဆော့ရင် အများဆုံးရသရေပေါ့။ ဒါတောင် သရေကိုလက်မခံပဲ ပင်နယ်တီနဲ့ အဆုံးအဖြတ်ပေးတဲ့ပွဲဆို ဂိုးသွင်းဖို့ကသေချာပေါက်အရေးကြီးလာမှာပါ။
ဒီတော့ သင်စုဖွဲ့ထားတဲ့လူတွေထဲမှာ လေသမားတွေချည်းပဲ ပါလို့မရပါဘူး။ Start-upဆိုတာ ရုံးဆင်းဖို့ ငါးမိနစ်အလိုမှာ အထုတ်ပြင်ထားတဲ့သူမျိုးတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းလို့မရပါဘူး။ တက်ကြွနေပြီးမိမိလုပ်ငန်းအတွက် ပေးဆပ်လိုတဲ့သူတွေ အပြည့်ရှိမှသာအောင်မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Start-up တွေပြိုကွဲရတဲ့ အကြောင်းအရင်းထဲမှာ အရင်းအနှီးကုန်သွားတာက ထ်ိပ်ဆုံးကပါဝင်ပါတယ်။မိမိအဖွဲ့ထဲမှာ သူ့ဘာသာတောင် မနည်းရုန်းကန်နေရတဲ့ အိမ်ထောင်ရှင်တွေပါရင်ပိုဆိုးပါတယ်။ အိမ်ထောင်နဲ့ဆို သူ့မှာ အများကြီး ကြည့်စရာတွေရှိနေပါတယ်။ လုပ်ချင်ရင်တောင် လုပ်လို့မရပါဘူး။ သူ့ရဲ့မိသားစုကို ကြည့်ရပါတယ်။ ဒီတော့ အစတည်းက ဘယ်လောက် အထိတောင့်ခံနုိုင်မလဲ တွက်ချက်သင့်ပါတယ်။ ၆လ အကြာမှာ ဝင်ငွေမရှိသေးရင် ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲ။ Plan Bက ဘာလဲ စတာတွေ စဉ်းစားထားသင့်ပါတယ်။
(၅) Plan B မရှိခြင်း
ဘုရင့်နောင် ဖောင်ဖျက်တာ နားထောင်လို့တော့ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်တွေ့ဘဝမှာ သိပ်ပြီး မလွယ်ကူလှပါဘူး။ ဖောင်ဖျက်တယ်ဆိုတာ နောက်ကို ဆုတ်လို့လည်း အဆင်မပြေတော့တဲ့ အခြေအနေမို့ပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့ Plan Bပေါ်ပိုပြီးယုံကြည် ပါတယ်။ အချို့ကတော့ ငါက Plan Bမရှိဘူး။ ရအောင် ပဲလုပ်လေ့ရှိတယ်ဆိုတဲ့သူမျိုးတွေတွေ့ဖူးပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ အမြဲPlan Bရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီလို ထားခြင်းကြောင့်လည်း အမြဲကိုအဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်။ Plan Bက သင်တို့အဖွဲ့ပေါ်မူတည်ပါတယ်။ ဒါမဖြစ်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူရှာကြမလား၊ ဘာလုပ်ကြမလဲ။ အဲ့ဒါက သင်စဉ်းစားရမယ့်အပိုင်းပါ။
အချို့က မလိုအပ်တာတွေ ဖြုန်းတတ်ကြပါတယ်။ ဥပမာ မလိုအပ်ပဲ ရုံးခန်းကြီးတာရှာတာမျိုး။ အထဲမှာထားတဲ့ တန်ဆာပလာတွေအတွက် မလိုအပ်ပဲ ဈေးကြီးပေးဝယ်တာမျိုး၊ ပိုက်ဆံမရှိသေးချိန် Taxiတွေ ခဏခဏစီးတာမျိုး၊ လက်ပ်တော့တွေ အကောင်းစားဝယ်တာမျိုးစသဖြင့် လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ စီးပွားရေးတစ်ခုစတင်တဲ့အချိန်မှာ တတ်နိုင်သမျှချွေတာတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ အထူးသဖြင့်ငွေသေသွားမယ့်နေရာမျိုးတွေမှာပေါ့။ ဥပမာကိုယ်လုပ်မယ့်လုပ်ငန်းက မိမိရုံးကို လူတွေခဏခဏလာမယ့် အလုပ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင် ရုံးခန်းအကောင်းစားကြီး မငှားသင့်ပါဘူး။ မိမိတို့အဖွဲ့ အလုပ်လို့အဆင်ပြေမယ့် နေရာမျိုးလောက်ဆိုရပါပြီ။
ဆိုလိုချင်တာက အလုပ်တစ်ခုကို ၂ယောက်လုပ်နေကြခြင်းပါ။ ဘောလုံးပွဲနဲ့ ဥပမာပြန်ပေးရရင် ဘောလုံးပွဲတစ်ခုမှာ ကစားသမား ၁၁ယောက်ဟာ သူ့နေရာနဲ့သူတာဝန်ကျေအောင် ထမ်းဆောင်ရပါတယ်။ အလယ်တန်းက ကစားသမားက တိုက်စစ်မှုးနေရာ လိုက်ဆော့နေလို့မရပါဘူး။ ဂိုးမသွင်းရလို့ စိတ်ကောက်တာမျိုးလည်း လုပ်လို့မရပါဘူး။ အဖွဲ့လိုက် မိမိကျတဲ့နေရာမျိုးမှာ တာဝန်ကျေမှ အောင်မြင်မှာပါ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲ တစ်နေရာထဲမှာ စုပြုံပြီးလုပ်နေရင်တော့ ဘယ်လိုမှ အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူး။
၃လလောက်လုပ်တယ်၊ အမြတ်ရဖို့ လမ်းမမြင်သေး၊ စိတ်ဓာတ်ကျ၊ ဗြောင်းဆန်၊ teamထဲမှာ ဟိုလူ့ကိုမဲ၊ ဒီလူ့ကိုမဲ၊ နင်မကောင်းလို့ ၊ သူမကောင်းလို့ စသဖြင့် ကယောင်ခြောက်ခြားဖြစ်တတ်တဲ့သူမျိုးပါလာရင်တော့ အဲ့ဒီလုပ်ငန်းရေရှည်တည်တံ့ဖို့မလွယ်ပါဘူး။
အောင်မြင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတော်တော်များများမှာ ခေါင်းဆောင်ရှိပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်မပါပဲ တစ်နေရာကိုသွားဖို့ဆိုတာ မလွယ်ပါဘူး။ မိမိတို့ဖွဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့ထဲမှာ အားလုံးက နောက်လိုက်တွေချည်းပဲဖြစ်နေလို့ မရပါဘူး။ ဦးစီးဦးဆောင်ရှိမယ့်သူတစ်ယောက်ရှိဖို့လိုပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်နေရာ ဝိုင်းလုနေလို့လည်းမဖြစ်ပါဘူး။ တကယ်တော့ ခေါင်းဆောင်ဆိုတာ တာဝန်အရမ်းကြီးပါတယ်။ ထိုက်တန်တဲ့သူကို ဝိုင်းပြီးခန့်အပ်သင့်ပါတယ်။ ပါဝါအများကြီးမပေးထားရင်တောင် ဒီလုပ်ငန်းကို ဦးစီးဦးဆောင် သဘောမျိုးလေးတော့ထားသင့်ပါတယ်။
သူငယ်ချင်းအရင်းတွေ စုလုပ်ကြရင် ဒီပြဿနာသိပ်မဖြစ်တတ်ပါဘူး။ ဖြစ်တတ်တာက ကိုယ့်သူငယ်ချင်းကနောက်ထပ် တစ်ယောက်ကို ခေါ်သွင်းလာတဲ့အခါမျိုးမှာပါ။ ဘာမှလည်း လုပ်ငန်းအကြောင်းနားမလည်။ အလကားနေ မကောင်းမြင်။ လူတိုင်းအမြင်ကတ်၊ ဘယ်သူနဲ့မှ အဆင်မပြေ၊ စတဲ့လူမျိုးပါ။ အဲ့ဒီလိုလူမျိုးကိုတော့ သတိထားကြပါ။ တစ်ဖွဲ့လုံးပျက်သွားအောင် ဖျက်ဆီးနုိုင်တဲ့ အစွမ်းသူ့မှာရှိပါတယ်။
အချို့က စီးပွားရေးကို စိတ်ကူးလေးနဲ့ပဲဝင်လုပ်ကြပါတယ်။ တစ်ယောက်တည်း လုပ်ရင်တော့ ကိစ္စမရှိပါဘူး။ အများနဲ့လုပ်ရင်တော့ စိတ်ညစ်စရာတွေ အများကြီးသင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ အစောကြီးတည်းက မီးစင်ကြည့်ကမယ်ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ဆိုရင်တော့ အဲ့ဒီစီးပွားရေး ကြာရှည်မခံပါဘူး။
အထက်ပါအချက်တွေကတော့ ကျွန်တော်သိသလောက်ပဲဖြစ်ပြီး အခြားအချက်တွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ သိသလောက်ကို အခြားသူတွေ ဗဟုသုတရဖို့ Shareခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့စီးပွားရေး လုပ်တဲ့အခါ သတိထားနုိုင်ဖို့ပါ။
မိုးရှင်း (I.M.T) ရေးသားသည်။
သူငယျခငျြးတှစေုပွီး စီးပှားရေးလုပျမယျဆိုရငျ (unicode)
ရေးသားသူ – မိုးရှငျး (I.M.T)
ဒီခတျေထဲမှာ အခြို့လူငယျတှေ သူငယျခငျြးတှစေုပွီး လုပျငနျးတဈခုကို အတူတူလုပျတတျကွပါတယျ။ Start-up လေးတှေ ဟိုဟိုဒီဒီရှိလာကွပါတယျ။ ဒီလိုပျေါလာတာ ကောငျးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အမြားအားဖွငျ့ ရရှေညျမခံပဲ ပွိုကှဲသှားတတျကွပါတယျ။ ဘာ့ကွောငျ့မြားပါလဲ? ကြှနျတျောလညျး Start-up လုပျနတေဲ့သူတဈယောကျဖွဈပွီး ဒီလိုနယျပယျထဲက လူတှလေညျးအမြားကွီးတှဖေူ့းတာကွောငျ့ သိသမြှ ရှဲပါရစေ။
မွနျမာတှမှော အကွီးမားဆုံး အားနညျးခကျြက အားနာတတျခွငျးပဲ။ စီးပှားရေးမှာ အားနာလို့မရဘူးဆိုတာကို လကျမခံနိုငျကွဘူး။ ခငျတာကခငျတာပဲ စီးပှားရေးလုပျကွပွီဆိုရငျ စာခြုပျစာတမျး၊ မှတျတမျး မှတျရာ စသဖွငျ့ပွတျပွတျသားသားရှိသငျ့တယျ။ နငျကဘယျလောကျပိုကျဆံစိုကျမှာလဲ၊ အခြိနျရော ဘယျလောကျပေးမှာလဲ၊ ဘယျအခြိနျအထိလုပျနိုငျမှာလဲ၊ ဘယျအခြိနျအထိအမွတျမရပဲနနေိုငျလဲ၊ စသဖွငျ့ အားလုံးပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးရှိရပါမယျ။ ကတိပေးထားသလိုမလုပျရငျရော ဘာဖွဈမလဲ၊ ဖွဈနိုငျတဲ့ထောငျ့ပေါငျးစုံက စဉျးစားပါ။ ဆကျမလုပျတော့တာ၊ ထှကျသှားတာ၊ သစ်စာဖောကျတာ မဖွဈနိုငျဘူးလို့မထငျပါနဲ့။ ငှကေလူ့စိတျကို မထငျမှတျ ထားနိုငျလောကျအောငျ ပွောငျးလဲစပေါတယျ။ စာခြုပျစာတမျးကသာ သသေခြောခြာ ထိနျးခြုပျနိုငျတာပါ။
ခမြယျ၊ လုပျမယျ၊ ဆငျဖမျးမယျ၊ ကြားဖမျးမယျ၊ တကယျ့တကယျ ခွငျဖမျးခငျြရငျတောငျ ရှာမရတော့တဲ့ သူမြိုးတှရှေိပါတယျ။ သှေးပူတုနျးလြှောကျ ပွောတာတှကေို မယုံမိပါစနေဲ့။ သသေခြောခြာအခြိနျပေးပါ။ အားလုံးစိတျပါတာသခြောမှလုပျပါ။ သှေးပူတုနျး ဝုနျးဝုနျးဒိုငျးဒိုငျးလုပျပွီး နညျးနညျးလောကျ လှိုငျးလှုပျတာနဲ့ အိမျပွနျခငျြတယျဆိုတဲ့ သူမြိုးတှရှေိပါတယျ။ မုနျတိုငျးသာတိုကျရငျတော့ ရှာလို့ပါရတော့မှာ မဟုတျပါဘူး။ အားလုံးတကယျ စိတျပါတာဟုတျမဟုတျသိဖို့လိုပါတယျ။
(၃) စိတျကူးသမားရှိပွီး အဆုံးသတျသမားမရှိခွငျး
တဈခါတဈလေ လူတှငွေငျးတတျကွတယျ။ Idea ရှိတဲ့သူနဲ့ အကောငျအထညျဖျောတတျတဲ့သူ ဘယျသူက ပိုအရေးကွီးလဲတဲ့။ ကြှနျတျောတဈဦးတဈယောကျ ထဲရဲ့အမွငျအရ အိုငျဒီယာဟာ လူတျောတျောမြားမြား စဉျးစားတတျကွပါတယျ။ အဲ့ဒီအိုငျဒီယာကို အကောငျ အထညျဖျောနိုငျမယျ့သူသာ ရှာရခကျတာပါ။ ဥပမာ ဘောလုံးတဈသငျးမှာ တဈသငျးလုံးအရေးကွီးတာမှနျတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဂိုးသှငျးဖို့ အဆုံးသတျကောငျးတဲ့ ကစားသမားရှိမှ နိုငျမှာပါ။ တဈသငျးလုံးပိတျဆော့ရငျ အမြားဆုံးရသရပေေါ့။ ဒါတောငျ သရကေိုလကျမခံပဲ ပငျနယျတီနဲ့ အဆုံးအဖွတျပေးတဲ့ပှဲဆို ဂိုးသှငျးဖို့ကသခြောပေါကျအရေးကွီးလာမှာပါ။
ဒီတော့ သငျစုဖှဲ့ထားတဲ့လူတှထေဲမှာ လသေမားတှခေညျြးပဲ ပါလို့မရပါဘူး။ Start-upဆိုတာ ရုံးဆငျးဖို့ ငါးမိနဈအလိုမှာ အထုတျပွငျထားတဲ့သူမြိုးတှနေဲ့ ဖှဲ့စညျးလို့မရပါဘူး။ တကျကွှနပွေီးမိမိလုပျငနျးအတှကျ ပေးဆပျလိုတဲ့သူတှေ အပွညျ့ရှိမှသာအောငျမွငျနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
Start-up တှပွေိုကှဲရတဲ့ အကွောငျးအရငျးထဲမှာ အရငျးအနှီးကုနျသှားတာက ထျိပျဆုံးကပါဝငျပါတယျ။မိမိအဖှဲ့ထဲမှာ သူ့ဘာသာတောငျ မနညျးရုနျးကနျနရေတဲ့ အိမျထောငျရှငျတှပေါရငျပိုဆိုးပါတယျ။ အိမျထောငျနဲ့ဆို သူ့မှာ အမြားကွီး ကွညျ့စရာတှရှေိနပေါတယျ။ လုပျခငျြရငျတောငျ လုပျလို့မရပါဘူး။ သူ့ရဲ့မိသားစုကို ကွညျ့ရပါတယျ။ ဒီတော့ အစတညျးက ဘယျလောကျ အထိတောငျ့ခံနိုငျမလဲ တှကျခကျြသငျ့ပါတယျ။ ၆လ အကွာမှာ ဝငျငှမေရှိသေးရငျ ဘာဆကျလုပျကွမလဲ။ Plan Bက ဘာလဲ စတာတှေ စဉျးစားထားသငျ့ပါတယျ။
(၅) Plan B မရှိခွငျး
ဘုရငျ့နောငျ ဖောငျဖကျြတာ နားထောငျလို့တော့ ကောငျးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ လကျတှဘေ့ဝမှာ သိပျပွီး မလှယျကူလှပါဘူး။ ဖောငျဖကျြတယျဆိုတာ နောကျကို ဆုတျလို့လညျး အဆငျမပွတေော့တဲ့ အခွအေနမေို့ပါ။ ဒါပမေယျ့ ကြှနျတျောကတော့ Plan Bပျေါပိုပွီးယုံကွညျ ပါတယျ။ အခြို့ကတော့ ငါက Plan Bမရှိဘူး။ ရအောငျ ပဲလုပျလရှေိ့တယျဆိုတဲ့သူမြိုးတှတှေဖေူ့းပါတယျ။ ကြှနျတျောကတော့ အမွဲPlan Bရှိပါတယျ။ အဲ့ဒီလို ထားခွငျးကွောငျ့လညျး အမွဲကိုအဆငျပွခေဲ့ပါတယျ။ Plan Bက သငျတို့အဖှဲ့ပျေါမူတညျပါတယျ။ ဒါမဖွဈရငျ ဘယျလိုလုပျကွမလဲ။ ရငျးနှီးမွှုပျနှံသူရှာကွမလား၊ ဘာလုပျကွမလဲ။ အဲ့ဒါက သငျစဉျးစားရမယျ့အပိုငျးပါ။
အခြို့က မလိုအပျတာတှေ ဖွုနျးတတျကွပါတယျ။ ဥပမာ မလိုအပျပဲ ရုံးခနျးကွီးတာရှာတာမြိုး။ အထဲမှာထားတဲ့ တနျဆာပလာတှအေတှကျ မလိုအပျပဲ ဈေးကွီးပေးဝယျတာမြိုး၊ ပိုကျဆံမရှိသေးခြိနျ Taxiတှေ ခဏခဏစီးတာမြိုး၊ လကျပျတော့တှေ အကောငျးစားဝယျတာမြိုးစသဖွငျ့ လုပျတတျကွပါတယျ။ စီးပှားရေးတဈခုစတငျတဲ့အခြိနျမှာ တတျနိုငျသမြှခြှတောတာ အကောငျးဆုံးပါပဲ။ အထူးသဖွငျ့ငှသေသှေားမယျ့နရောမြိုးတှမှောပေါ့။ ဥပမာကိုယျလုပျမယျ့လုပျငနျးက မိမိရုံးကို လူတှခေဏခဏလာမယျ့ အလုပျမဟုတျဘူးဆိုရငျ ရုံးခနျးအကောငျးစားကွီး မငှားသငျ့ပါဘူး။ မိမိတို့အဖှဲ့ အလုပျလို့အဆငျပွမေယျ့ နရောမြိုးလောကျဆိုရပါပွီ။
ဆိုလိုခငျြတာက အလုပျတဈခုကို ၂ယောကျလုပျနကွေခွငျးပါ။ ဘောလုံးပှဲနဲ့ ဥပမာပွနျပေးရရငျ ဘောလုံးပှဲတဈခုမှာ ကစားသမား ၁၁ယောကျဟာ သူ့နရောနဲ့သူတာဝနျကအြေောငျ ထမျးဆောငျရပါတယျ။ အလယျတနျးက ကစားသမားက တိုကျစဈမှုးနရော လိုကျဆော့နလေို့မရပါဘူး။ ဂိုးမသှငျးရလို့ စိတျကောကျတာမြိုးလညျး လုပျလို့မရပါဘူး။ အဖှဲ့လိုကျ မိမိကတြဲ့နရောမြိုးမှာ တာဝနျကမြှေ အောငျမွငျမှာပါ။ ဒီလိုမှမဟုတျပဲ တဈနရောထဲမှာ စုပွုံပွီးလုပျနရေငျတော့ ဘယျလိုမှ အဆငျပွမှောမဟုတျပါဘူး။
၃လလောကျလုပျတယျ၊ အမွတျရဖို့ လမျးမမွငျသေး၊ စိတျဓာတျကြ၊ ဗွောငျးဆနျ၊ teamထဲမှာ ဟိုလူ့ကိုမဲ၊ ဒီလူ့ကိုမဲ၊ နငျမကောငျးလို့ ၊ သူမကောငျးလို့ စသဖွငျ့ ကယောငျခွောကျခွားဖွဈတတျတဲ့သူမြိုးပါလာရငျတော့ အဲ့ဒီလုပျငနျးရရှေညျတညျတံ့ဖို့မလှယျပါဘူး။
အောငျမွငျနတေဲ့အဖှဲ့အစညျးတျောတျောမြားမြားမှာ ခေါငျးဆောငျရှိပါတယျ။ ခေါငျးဆောငျမပါပဲ တဈနရောကိုသှားဖို့ဆိုတာ မလှယျပါဘူး။ မိမိတို့ဖှဲ့ထားတဲ့အဖှဲ့ထဲမှာ အားလုံးက နောကျလိုကျတှခေညျြးပဲဖွဈနလေို့ မရပါဘူး။ ဦးစီးဦးဆောငျရှိမယျ့သူတဈယောကျရှိဖို့လိုပါတယျ။ ခေါငျးဆောငျနရော ဝိုငျးလုနလေို့လညျးမဖွဈပါဘူး။ တကယျတော့ ခေါငျးဆောငျဆိုတာ တာဝနျအရမျးကွီးပါတယျ။ ထိုကျတနျတဲ့သူကို ဝိုငျးပွီးခနျ့အပျသငျ့ပါတယျ။ ပါဝါအမြားကွီးမပေးထားရငျတောငျ ဒီလုပျငနျးကို ဦးစီးဦးဆောငျ သဘောမြိုးလေးတော့ထားသငျ့ပါတယျ။
သူငယျခငျြးအရငျးတှေ စုလုပျကွရငျ ဒီပွဿနာသိပျမဖွဈတတျပါဘူး။ ဖွဈတတျတာက ကိုယျ့သူငယျခငျြးကနောကျထပျ တဈယောကျကို ချေါသှငျးလာတဲ့အခါမြိုးမှာပါ။ ဘာမှလညျး လုပျငနျးအကွောငျးနားမလညျ။ အလကားနေ မကောငျးမွငျ။ လူတိုငျးအမွငျကတျ၊ ဘယျသူနဲ့မှ အဆငျမပွေ၊ စတဲ့လူမြိုးပါ။ အဲ့ဒီလိုလူမြိုးကိုတော့ သတိထားကွပါ။ တဈဖှဲ့လုံးပကျြသှားအောငျ ဖကျြဆီးနိုငျတဲ့ အစှမျးသူ့မှာရှိပါတယျ။
အခြို့က စီးပှားရေးကို စိတျကူးလေးနဲ့ပဲဝငျလုပျကွပါတယျ။ တဈယောကျတညျး လုပျရငျတော့ ကိစ်စမရှိပါဘူး။ အမြားနဲ့လုပျရငျတော့ စိတျညဈစရာတှေ အမြားကွီးသငျတှရေ့ပါလိမျ့မယျ။ အစောကွီးတညျးက မီးစငျကွညျ့ကမယျဆိုတဲ့ ပုံစံမြိုးနဲ့ဆိုရငျတော့ အဲ့ဒီစီးပှားရေး ကွာရှညျမခံပါဘူး။
အထကျပါအခကျြတှကေတော့ ကြှနျတျောသိသလောကျပဲဖွဈပွီး အခွားအခကျြတှလေညျးရှိကောငျးရှိနိုငျပါသေးတယျ။ သိသလောကျကို အခွားသူတှေ ဗဟုသုတရဖို့ Shareခွငျးသာဖွဈပါတယျ။ သူငယျခငျြးတှနေဲ့စီးပှားရေး လုပျတဲ့အခါ သတိထားနိုငျဖို့ပါ။
မိုးရှငျး (I.M.T) ရေးသားသညျ။
Posted in Successful, ThinkingTagged successful, thinking
Previous post ကျောက်သွေး (Ferric Ammonium Citrate)၏ ဆေးဖက်ဝင်ပုံအကြောင်း
Next post ကမ္ဘာ့အဆိုးရွားဆုံး နျူကလီးယားပေါက်ကွဲမှု နှင့် နျူကလီးယားတစ္ဆေမြို့